रोचक Archives - Page5of 15 - Samudrapari.com
ग्यासचुलो फोहोर भयो ? चिन्ता नलिनुस्, सिक्नुहोस् टिप्स
काठमाडौं – सम्पूर्ण परिवार स्वस्थ रहन सबैभन्दा पहिला खाना पाक्ने स्थान भान्साकोठा सफा हुनु जरुरी छ । भान्सामा खाना पकाउँदा ग्यासचुलो फोहोर हुनु स्वाभाविक हो । खाना पकाएर खाइसकेपछि चुलो सफा गर्ने समयसम्म प्रायः ग्यासचुलोमा पोखिएका खानेकुरा जमिसकेको हुन्छ । ग्यासमा लागेका खानेकुराका दागलाई सामान्य ट्रिक्स लगाएर सजिलै सफा गर्न सकिन्छ । त्यसैले चिन्ता नलिनुस् अब । सिक्नुहोस् टिप्स, लगाउनुस् ट्रिक्स : तातो पानी र डिसवास तातो पानी र डिसवासको प्रयोगले ग्यासचुलोमा जमेको साना दाग सजिलै हटाउन सकि...
मान्छेको मासु खाने खुलासापछि खैलाबैला
काठमाडौं - दक्षिण अफ्रिकाको क्वाजुलु–नटाल प्रान्तको शायामोया गाउँमा टाउको विनाको एउटा शव भेटिएपछि स्थानीयवासीमा अहिले त्रास फैलिएको छ । गत जुलाइ महिनादेखि हराइरहेकी २५ वर्षीया जानेले लाशवेयो मान्छेको मासु खाने एउटा समूहको शिकार बनेको ठानिएको छ । सो समूहसँग सम्बद्ध भएको आशंकामा अहिलेसम्म पाँचजना पक्राउ परेका छन् । परम्परागत उपचारकले गत हप्ता प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेपछि कुहिएको अवस्थामा लाशवेयोको शव भेटिएको थियो । मान्छेका कान ती उपचारकले मान्छेको मासु खाँदा–खाँदै आफूलाई दिक्क लागिसकेको प...
हिरोशिमालाई ध्वस्त पार्ने त्यो युद्धपोत…
काठमाडौं - दोस्रो विश्वयुद्धका बेला जापानी पनडुब्बीको आक्रमणमा परेर डुबेको अमेरिकी युद्धपोत 'युएसएस इण्डियानापोलिस'को भग्नावशेष ७२ वर्षपछि फेला परेको छ । उक्त युद्धपोतको भग्नावशेष साढे पाँच किलोमिटर गहिराइमा समुद्र सतहमा फेला परेको हो । एउटा गोप्य मिसनबाट फर्केने क्रममा उक्त युद्धपोत जापानी आक्रमणमा परेको थियो । उक्त युद्धपोत एउटा गोप्य मिसन अन्तर्गत परमाणु बम पुर्‍याउन गएको थियो र पछि हिरोशिमामा त्यसको प्रयोग गरियो । परमाणु हमला युद्धपोतमा सवार १,१९६ मध्ये ३१६ जनालाई बचाउन सकिएको थियो ।...
काठमाडौं - मानिस राम्रो देखिन साह्रै दुब्लो हुनु हुँदैन र अनावश्यक मोटाउनु पनि हुँदैन । त्यसैले राम्रो देखिनका लागि मझौला टाइपको हुनुपर्छ । तर, अचम्मको कुरा के हो भने मानिस मोटाउँछु भनेर पनि सक्दैन, दुब्लाउँछु भनेर दिनदिनै मर्निङवाक जान्छ, तर दुब्लाउँदैन । गर्ने के त ? यसो गरौँ तौल बढाउन : खानपानमा नियमित ध्यान दिनुहोस् । प्रोटिनयुक्त खाना खानुहोस् । ६० केजी तौलबराबर ९० ग्राम प्रोटिन हुन आवश्यक छ । राजमा, दूध, बदाम चिकेन र अन्डामा प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ । कार्बोहाइड्रेडयुक्...
जब सहरका कुकुरहरु एकाएक निलो हुन थाले
काठमाडौं - भारतको मुम्बई सहरमा निलो रंगका कुकुरहरु घुम्न थालेका छन् । नयाँ मुम्बईका घुमन्ते कुकुरहरु एकाएक निलो रङमा बदलिएपछि सबै अचम्ममा परेका छन् । आखिर कुकुरहरु किन निलो भए ? यसको कारण खोजिँदैछ । नयाँ मुम्बईका गल्ली गल्लीमा निलो रङका कुकुर देखिन्छन् । त्यस्ता कुकुर देख्ने हर कोहीले कारण जान्न चाहन्छ । अनि कुकुर निलो भएको यो घटना महाराष्ट्र प्रदुषण नियन्त्रण बोर्डसम्म पुग्यो । यहाँको स्थानीय जनावर संरक्षण सेलले यसबारेको उजुरी दर्ता गरेको थियो । कुकुर निलो भएको घटनाका लागि तलोजा इलाकास्थि...
यी ५ कुरामा ध्यान दिए सम्बन्ध सधैँ टिक्छ
काठमाडौं - साथीहरूबीचको सम्बन्ध जोडिन जति सहज छ, टिक्न उति नै गाह्रो छ । कहिलेकाहीँ सामान्य कुराले पनि वर्षौंदेखिको सम्बन्ध टुट्न सक्छ । साथीहरूबीच एकपटक गडबडी भए अर्कोपटक विश्वास गुम्न सक्छ । सम्बन्धमा धेरैजसो यो मेरो हो, त्यो तेरो हो जस्ता स–साना कुराले सम्बन्ध बिगारिरहेको हुन्छ । यदि आफ्ना नजिकका साथीहरूबीचको सम्बन्ध टिकाइराख्न धेरै ठूलो योगदान गरिराख्नु पर्दैन । सामान्य केही कुरा महत्वपूर्ण हुन्छन् र ती कुराको ख्याल गर्न जरुरी छ । आर्थिक कारोबार सफा गर्नुहोस् एक–आपसमा हुने धनको लेनद...
तपाईको ढाड दुख्ने समस्या छ ? छ, भने यसो गर्नुहोस्
काठमाडौं - स्वस्थ शरीरका लागि योग निकै महत्वपूर्ण छ । योग शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त रहनका लागि गर्नुपर्छ । योगले शरीर मात्र होइन, मानसिक रूपमा पनि तन्दुरुस्त राख्न मद्दत गर्छ । नियमित योग गर्दा शरीरमा हुने अनावश्यक विकार हटाउनुका साथै जीवनमा पर्ने अप्ठ्याराहरू हटाउन पनि मद्दत गर्छ । नियमित रूपमा योग अभ्यास गर्दै जाँदा हाम्रो शरीरका सम्पूर्ण अंग स्वस्थ र सक्रिय हुँदै जान्छन् । साथै, दिमाग पनि स्वस्थ हुन्छ । योगले हामो शरीरमा हुने विभिन्न रोग हटाउन मद्दत गर्छ । शरीरलाई आराम दिन पनि योग गर्ने गरि...
यी युवती बन्दैछिन् दुनियाकै अग्ली बेहुली..
काठमाडौं - ब्राजिलियन युवती एलिसेनीको लम्बाई ६ फुट ८ इन्च छ । २० वर्षकी एलिसेनीले छिटै बिहे पनि गर्दैछिन् र उनी दुनियाकै सबैभन्दा अग्ली बेहुली बन्नेछिन् । एलिसेनी डा क्रुजले आफुजस्तै अग्लो बेहुलो रोजिन् भन्ने सोच्नुभयो भने तपाईं गलत हुनुहुन्छ । पेशाले निर्माण मजदुर रहेका उनका हुनेवाला बेहुला फ्राकिनाल्डो उनीभन्दा १ फुट चार इन्च होचा छन् । एलिसेनी र फ्राकिनाल्डो तीन वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा छन् र पछिल्लो एक वर्षदेखि लिभ इन रिलेसनमा । अब उनीहरुले बिहे गर्ने निधो गरिसकेका छन् । बिहेसँगै एलिसे...
यो हो कहिल्यै पनि नमर्ने जीव, यस्तो छ रहस्य
काठमाडौं - आठवटा खुट्टा भएको सुक्ष्म जीव टार्डिग्रेड्सको वंशाणु (जिन)को अध्ययनपश्चात उसको असाधारण क्षमताको पहिचान भएको छ । एक मिलिमिटर वा त्योभन्दा पनि सानो आकारको यो जीव विकिरणयुक्त क्षेत्र, अत्यधिक चिसो ठाउँ, खतरनाक सुख्खा ठाउँमा मात्र होइन, अन्तरीक्षणमा समेत बाँच्न सक्दछ भनिन्छ । शोधकर्ताहरुले यसका दुईवटा प्रजातिहरुको डिएनए डिकोड गरेका छन् र यस जीवमा एउटा जिन पत्ता लगाएका छन् । सोही जिनका कारण यो जीवले निकै प्रतिकुल वातावरणमा पनि आफूलाई बँचाइराख्न सक्दछ र पुनः तंग्रिएर उठ्दछ । यो जीवनलाई प...
पत्नीलाई सुन्दरी प्रतियोगिता जिताउन लोग्नेले सारी चोरेपछि..
काठमाडौं - तपाईंले पनि सुन्नुभएको होला, प्रेम र युद्धमा सबै जायज हुन्छ । प्रेममा मानिसहरुले हद पार गर्न पछि पर्दैनन् । मायालुहरु कहिलेकाहिँ आफ्नो मायालुका लागि यस्ता हर्कत पनि गरिदिन्छन् जो असहज लाग्छन् र सबैले मानक बनाउँछन् । भारतको छत्तिसगढका एक पुरुषले यस्तै गरेका छन् । श्रीकान्त गुप्ता नामका ती व्यक्तिले आफ्नी श्रीमतीलाई सुन्दरी प्रतियोगिता जिताउनका लागि शोरुमबाट सारी नै चोरेका छन् । श्रीकान्तकी पत्नी प्रमिला स्थानीय एक सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी भएकी थिइन् । उनै पत्नीलाई प्रतियोगितामा...